LiFlex, fehin-kibo ho an'ny Apple Watch izay hanome anao fahaleovan-tena bebe kokoa | Avy amin'ny mac aho
Ny kongresin'ny World Mobile manaraka izay hatao any Barcelona (Espana) amin'ny faran'ity volana febroary ity dia hanana fahagagana miafina maro. Hahita fiasa vaovao marobe amin'ny lafiny telefaona finday izahay. Na izany aza, izy io koa dia toerana mety indrindra ho an'ireo orinasa natokana ho an'ny sehatry ny kojakoja. Ary nisy orinasa niantso LiBEST dia hanatrika ny tadiny ho an'ny Apple Watch LiFlex.
Ny iray amin'ireo lafin-javatra izay mampiahiahy anay indrindra mpampiasa izay matetika mandany andro lavitry ny trano dia tsy lany bateria mihitsy amin'ny fitaovantsika. Marina fa raha any amin'ny birao iray na any amin'ny cafeteria isika dia afaka mampiasa plug foana. Fa ny tsara indrindra dia ny mitondra kely indrindra amintsika fitaovana azo atao. Ary ny fehin-kibo LiFlex no tiana holazaina amin'ny: omeo fahaleovan-tena bebe kokoa ny Apple Watch mandritra ny tontolo andro.
Raha ny fahitana azy, LiBEST dia tsy te hanome antsipiriany marobe momba ny fampiasana azy. Fa eo ihany koa ny hevitr'izy ireo PhoneArena, Ity fehy Apple Watch ity dia hanome anao andro fanampiny amin'ny fiainana bateria. Ho fanampin'izay, raha ny filazan'ny mpanamboatra azy ihany, amin'ny fiheverana fa miampanga ny LiFlex isaky ny roa andro ny mpampiasa, dia tokony hanana fiainana ilaina mandritra ny roa taona farafahakeliny.
Tsy manana antsipiriany momba ny habetsaky ny fahaizan'ny bateria anatiny isika, izay azonay fantarina dia ny endriny. Tsy fehin-kibo mahazatra - efa noheverinao sahady - na dia ny tena marina dia tsy ho ratsy tarehy koa izy io. Mazava ho azy, dia hisy ampahany maromaro. Fizarana izay hanamboatra ny famantaranandro amin'ny ampahany lehibe izay hanana ny ampahany roa amin'ny bateria mitambatra. Toy izany koa, anoroana hevitra izany Amin'ny voalohany dia tsy ho an'ny boaty Apple Watch 42 mm ihany io; aorian'izay dia hiseho ireo maodely mifanaraka amin'ny kinova kely 38mm. Mazava ho azy, tsy fantatsika ny antsipirian'ny vidiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » LiFlex, fehin-kibo ho an'ny Apple Watch izay hanome anao fahaleovan-tena bebe kokoa